HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aukan Aymara Batak (Toba) Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Luo Luvale Malagasy Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Uruund Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Tsy misaina tsara ve izay mieritreritra hoe hitsangana ny maty? Tsy izany mihitsy. Hoy ny apostoly Paoly: “Raha amin’izao fiainana izao ihany no anantenantsika an’i Kristy, dia isika no mampahonena indrindra amin’ny olona rehetra. Efa natsangana tamin’ny maty tokoa anefa i Kristy, izay voaloham-bokatra amin’ireo nodimandry.” (1 Korintianina 15:19, 20) Nino i Paoly fa hatsangana ny maty, ary azo antoka izany noho ny nananganana an’i Jesosy. * (Asan’ny Apostoly 17:31) Nantsoiny hoe “voaloham-bokatra” i Jesosy satria izy no natsangana voalohany mba hiaina mandrakizay. Raha misy ny voalohany dia tsy maintsy misy koa ny manaraka azy.
Hoy i Joba tamin’Andriamanitra: “Haniry mafy hahita ny asan’ny tananao ianao.”—Joba 14:14, 15
Nahoana koa no azo antoka hoe hitsangana ny maty? Milaza ny marina foana i Jehovah, ilay Andriamanitra “tsy mahay mandainga.” (Titosy 1:2) Mbola tsy nandainga izy ary tsy handainga mihitsy. Izy ve dia hampanantena hoe hatsangany ny maty, sady asehony mihitsy hoe vitany izany, nefa avy eo tsy hotanterahiny akory?
Nahoana i Jehovah no hanangana ny maty? Satria be fitiavana izy. Hoy i Joba: “Raha maty ny lehilahy tomady, dia ho velona indray ve izy? ... Hiantso ianao, dia hamaly anao aho, satria haniry mafy hahita ny asan’ny tananao ianao.” (Joba 14:14, 15) Fantatr’i Joba fa tsy ho andrin’ilay Rainy any an-danitra ny hanangana azy. Niova ve Andriamanitra? Tsia. Hoy izy: “Izaho no Jehovah ary tsy miova aho.” (Malakia 3:6) Mbola maniry mafy hahita ny olona efa maty izy, ary tiany ho salama sy ho sambatra izy ireo. Toy izany koa ny fanirian’ny ray aman-dreny namoy zanaka. Tsy afaka manatanteraka ny faniriany anefa izy ireo, fa Andriamanitra kosa mahavita manatanteraka ny azy.—Salamo 135:6.
Tena ratsy ny fahafatesana nefa mbola hofoanan’Andriamanitra
Homen’i Jehovah hery ny Zanany mba hampifaliana an’ireo maty havana. Ary inona no tsapan’i Jesosy rehefa misy maty? Talohan’ny nananganany an’i Lazarosy, dia ‘nirotsaka ny ranomasony’, rehefa nahita ny anabavin’i Lazarosy sy ny namany nalahelo mafy izy. (Jaona 11:35) Indray mandeha koa izy nahita mpitondratena iray avy tao Naina. Maty ny zanaka lahitokan’io vehivavy io. “Nangoraka azy” i Jesosy “ka nanao taminy hoe: ‘Aza mitomany intsony.’ ” Tonga dia natsangany ilay zazalahy. (Lioka 7:13) Malahelo be àry izy rehefa misy maty na nidonam-pahoriana. Faly i Jesosy rehefa hataony falifaly daholo ny olona nisaona!
Efa nidonam-pahoriana ve ianao? Mety ho nahatsiaro ho tsy afa-nanoatra ianao tamin’izay. Soa ihany fa manome vahaolana Andriamanitra. Hampiasainy hanangana ny maty ny Zanany. Tadidio fa tian’Andriamanitra hahita an’izany ianao. Tiany hihaona amin’ny havanao hatsangana amin’ny maty ianao. Alao sary an-tsaina hoe hiaraka foana ianareo ary tsy hisaraka intsony mihitsy.
Hoy i Lionel, ilay voaresaka tany aloha: “Nianatra momba ny fitsanganan’ny maty aho, tatỳ aoriana. Tsy nety nino aho tamin’ny voalohany sady tsy natoky an’ilay olona niteny an’izany tamiko. Nohamariniko tao amin’ny Baiboly anefa ilay izy ary hitako hoe tena marina. Lasa tsy andriko indray izay hahitana an’i Dadabe.”
Mila fanazavana fanampiny ve ianao? Ho faly ny Vavolombelon’i Jehovah hampiseho anao ao amin’ny Baibolinao hoe nahoana izy ireo no resy lahatra fa tena hitsangana ny maty. *
^ feh. 3 Misy porofon’ny nananganana an’i Jesosy tamin’ny maty ao amin’ny boky Ny Baiboly—Tenin’Andriamanitra sa Tenin’olona?, pejy 78-86, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
^ feh. 9 Jereo ny toko 7 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy io ary azo .
Mangidy ny hoe maty vady ary maharitra ela ny fahoriana aterany. Ho hitanao ato fa mampahery ny fanantenana fitsanganana amin’ny maty.
Hizara Hizara Azonao Antoka ve hoe Mbola ho Velona ny Maty?